Ankoatra ilay lehilahy tsy nahatsiaro tena tototry ny ranontany, nianjeran’ilay rindrin-trano eny Antohomadinika Atsimo, omaly, tsy latsaky ny dimy ireo olona naratra. Voa mafy tamin’izany ny olona telo. Nitera-doza ny fandravana trano lehibe iray etsy Antohomadinika Atsimo, om...
Efa namidin’ity lehilahy iray tompona “agence de voyage” ireo fiarany Grand Starex miisa dimy. Nangatahany hofana tamin’ireo nividy azy indray anefa, avy eo namidiny an-tsokosoko, ary tsy hita intsony izay nanjavonany. Tratran’ny polisy ihany ilay lehilahy… nivadi-pitokisana. Na...
Fandrobana, fampihorohoroana, fanolanana, fandratrana… Eny, hatramin’ny vonoan’olona mihitsy aza. Nampikaikaika ny mponina any Imerintsiatosika sy ny manodidina mihitsy ity tambajotran-jiolahy, ravan’ny zandary, ity. Ny 17 oktobra lasa teo, voasambotry zandary avy ao amin’ny vond...
Manadio ny ao anatiny manoloana ireo saonjo iray lohasaha. Niaiky ny mpandrindra ny ady amin’ny kolikoly sy ny fitorohana eo anivon’ny zandary, ny Kly Andrianarivo Herilala fa misy ny lesoka eo anivon’izy ireo. Manaporofo izany ny antontanisa. Miisa 79 ireo zandary nenjehina noho...
Mbola eo ny valanaretina. Mitoetra hatrany, araka izany, ireo fepetra ara-pahasalamana, araka ny nampitain’ny filohan’ny Repoblika, omaly. Mbola mikatona ny sisin-tany sy ny sidina avy any ivelany. Mbola voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 200. Foana kosa, manomboka izao, ny...
Miraradraraka tato ho ato ny fanamelohana higadra an-terivozona mandra-pahafaty,anenjehana ireo voarohirohy noho ny raharaha fikambanan-jiolahy arahina fandrobana sy vonoan’olona feno habibiana. Voampanga roa indray no niharan’izany, omaly, tao amin’nyFitsarana ady heloka bevava,...
Nihoatra ny alikaola… Nifamaly ireto mpivady rehefa mamomamo ka tonga tany amin’ny fifampikasihan-tanana izany. Vokany, naratra mafy tsy nahatsiaro tena ilay ramatoa, noho ny daroka nataon’ny vadiny. Tsy tana ny ainy na dia nentina teny amin’ny hôpitaly aza. Vehivavy 23 taona ir...